तिथि मेरो पत्रु » पांच अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल भूलों बचें
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: जुलाई. 13 2020 |2मिनेट पढ्न
यो अनलाइन डेटिङ गर्न आउँदा, आफ्नो डेटिङ प्रोफाइल महत्वपूर्ण छ. तपाईं आफ्नो बारे सबै महत्त्वपूर्ण जानकारी सहित छु सुनिश्चित गर्न छ तर तपाईं पनि यो ताजा र रोचक राख्न चाहन्छु. आखिर, तपाईं बाहिर खडा गर्न चाहनुहुन्छ!
यहाँ आफ्नो अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल मा पोस्टिंग जोगिन के मा केहि सुझाव हो:
खराब / अनुचित फोटो
यो छापे सबै छन् र यो-पहिलो सामना गरौं आफ्नो प्रोफाइल फोटो तपाईं को एक तस्वीर एक बियर shotgunning वा क्यामेरा बन्द flipping छ भने, तपाईं संभावित मिति बन्द warding सक्छ. तपाईं एक उपयुक्त फोटो टिप्न तापनि, धमिलो हो कि फोटो परहेज प्रयास, त्यो पनि टाढा तपाईं घाम लगाएका संग आफ्नो अनुहार वा देख्न सक्दैनन् भनेर हो. तपाईं मुस्कुराइरहेको को एक सरल फोटो साँच्चै चमत्कार गर्छ.
लगातार हिज्जे र व्याकरण त्रुटिहरू
सबैले एक व्याकरण समर्थक छ र त्यो बिल्कुल ठीक छ. तथापि, आफ्नो प्रोफाइल हिज्जे र व्याकरण त्रुटि संग पाइला हाल्ने छ भने, मान्छे दोस्रो विचार बिना आफ्नो प्रोफाइल मा लंघन हुन सक्छ. कुनै पनि प्रमुख त्रुटिहरू पक्रन आफ्नो प्रोफाइल माध्यम एक आधारभूत हिज्जेपरीक्षणसम्पादनगर्दैछ चलान. म पनि पाठ छोटकरीमा र Lingo प्रयोग छैन सुझाव चाहन्छु (जस्तै "तपाई" को सट्टा "आफ्नो" वा "ई.पू." को सट्टा "किनभने") आफ्नो आफ्नो प्रोफाइल रूपमा स्पष्ट र सकेसम्म छोटो हुन चाहनुहुन्छ रूपमा.
अरू सबैको जस्तै बजाइरहेका
मान्छे को टन पढ्न प्रेम, यात्रा, फिल्म जाने, व्यायाम र खाने को लागि बाहिर जाने. तपाईँ निश्चित कुराहरू साँच्चै भावुक छन् भने, यात्रा जस्तै, तपाईं यो मन किन थप विस्तृत, जहाँ तपाईं गरिएको छ र जहाँ तपाईं जान चाहनुहुन्छ. यो तपाईं अलि धेरै जानकारी प्रदान यदि कुराकानी स्टार्टर बन्न मदत गर्न सक्छ. तपाईं पनि आफ्नो बारेमा र अद्वितीय कुराहरू कुरा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ. अरे, तपाईं बर्तन कक्षा या spelunking प्रेम गर्न अरू थाह कहिल्यै!
लघु विवरण बारे मा झूठ
यो तपाईं आफ्नो प्रोफाइल मा आफ्नो सबै भन्दा राम्रो विशेषताहरु प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ कि बुझन तर व्यक्तिगत विवरण बारे झूट हो, पनि साना, एक बुरा विचार छ. आफ्नो उचाइ बारेमा झूट, आफ्नो वजन वा आफ्नो उमेर मा पहिलो एक बडा सम्झौता जस्तै नलाग्न सक्छ, तपाईं अन्त मा एक मिति संग मिलन तर यदि तपाईं अनलाइन भेट, तिनीहरूले आश्चर्य लिएको र तपाईं बारेमा झूट बोले अरू के बारे आश्चर्य सुरु हुन सक्छ. इमानदारी सबै भन्दा राम्रो नीति छ.
कुरा गरेर धेरै कम या धेरै
कसैले एक अनलाइन डेटिङ प्रोफाइल पढ्दा छोटो उपन्यास पढ्न चाहनुहुन्छ. प्रोफाइल पनि लामो हुँदा, धेरै मानिसहरू धुन बाहिर जान्छन् र अर्को प्रोफाइल मा क्लिक. यही पनि छोटो छन् प्रोफाइलको लागि भने गर्न सकिन्छ. एक वा दुई वाक्य मा आफैलाई विस्तृतीकरण प्रोफाइल तपाईं बेसरोकार हेर्न बनाउन सक्छ. दुई महत्वपूर्ण छ बीच सिद्ध मध्यम पत्ता लगाउने, यति विस्तृत आफ्नो प्रोफाइल राख्न र कुरा गर्न.